Nkọwa:Okwunyere Ogwe Ndị Na-adọba ụgbọala na Led na Led,200 Watt Led Na-adọba ụgbọala Light,Ejiri Ibu Uhie
Home > Ngwaahịa > Okwunyere Ogwe Ndị Na-echekwa Ọdụm > Ejiri ụgbọala na-echekwa ọkụ ọkụ > 200 Watt Led Na-adọba ụgbọala na Lot oghere Light Fixtures
Mmetụta Ịma Ọcha zuru oke: 26000lm na-egbukepụ egbukepụ egbukepụ ụgbọala na -agba bọmbụ Light Fixtures na- enye ìhè dị mma nke na-enweghị ìhè ma ọ bụ ọkụ ọkụ. Photocell na mkpirisi okpuchi, ikpuchi ihu igwe iji ọrụ chi ọbụbọ na foto foto ma ọ bụ ntuziaka na-achịkwa ìhè na okpu mkpụmkpụ.
Ntugharị dị mfe : Nke a 200 Watt Led Mbụ Ejiri Ogwe Egwuregwu nwere ogwe aka ogwe aka na-90-degrees 90 degrees, anyị Led Pole Light Fixtures zuru okè maka ebe a na-adọba ụgbọala, ebe ịta nri, ugbo, ebe egwuregwu, oche tennis, ebe a na-egwu ọkụ, wdg.
Ihe na-adighi ike: Ntughari nke aluminom, Ntinye PC na IP65 waterproof rating, mma ihu igwe na mbido mmiri, okpomọkụ dissipation ikike, agbatị a A ọkụ ìhè na-agbapụ ruo 50000 awa.
Akwa Energy-arụmọrụ: Nke a S treet Light Fit na-edochi anya 600W HPS / MH ọkụ naanị na-ewe 200W, ruo 80% ikike nchekwa na-eji ya tụnyere oriọna.
Okwesiri Ndabere: L ed Street Street bụ DLC & ETL e depụtara maka ogo dị mma na ọrụ nchedo, ruru eru maka ịbịanye na mmemme nchịkwa obodo na mba niile, chekwaa ego maka gị. 5 afọ warranty, 100% afọ ojuju nkwa.
240W Ogwe Ụlọọrụ Na-adọba ụgbọala n'ọdụ ụgbọ mmiri ọkụ Kpọtụrụ ugbu a
Okwunyere Ogwe Ndị Na-adọba ụgbọala na Led na Led 200 Watt Led Na-adọba ụgbọala Light Ejiri Ibu Uhie